Companieslọ ọrụ mgbasa ozi na-achọ ụzọ iji jikọọ data ndị ọzọ na FLoC | Site na Linux
Companieslọ ọrụ mgbasa ozi na-achọ ụzọ iji jikọọ data ndị ọzọ na FLoC
Ọchịchịrị | 31/05/2021 10:22 | Noticias
FLoC bu uzo ezubere iche nke akpaka na-ejighi kuki site na Google nke "na-echebe nzuzo" site n'inye ndị ọrụ withntanetị ọkwa dị omimi karịa kuki ndị ọzọ.
Otú ọ dị, FLoC nwere ike ime ka ọ dị ngwangwa ma dịkwa mfe maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ịchọpụta ma nweta ozi banyere ndị mmadụ na ntanetị, dị ka data nzuzo dị iche iche na ụkpụrụ omume ọma na-atụ anya, ụlọ ọrụ na-amalite ikpokọta nzere FLoC na ozi profaịlụ amata dị.
Ndị ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-arụ ọrụ n'ahịa njikwa njirimara dijitalụ na-ekwu na ndị na-achọpụta ihe ga-enyere aka melite izizi nke sistemụ na-achọpụta njirimara ndị mmadụ, ọbụnakwa bụrụ ndị na-egosi gị ihe na-egosi gị
"Ihe nrịba ama anyị nwere, ka anyị ga-ezi ezi, na ihe nchọpụta FLoC ga-abụ otu n'ime akara anyị ga-eji," Mathieu Roche, CEO nke ID5 kwuru.
Google weputara FLoC dika ihe nlere-anya nke ezubere iche nke nzuzo n'ihi na usoro a achighi mmadu. Kama nke ahụ, FLoC na-eji mmụta igwe iji kpokọta ndị mmadụ dabere na ibe weebụ ha gara.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-emelite ID FLoC e kenyere ndị mmadụ kwa izu, nke ezubere iji nyochaa ha n'ime mkpokọta nwayọọ nwayọọ na-agbanwe ma o doro anya na ọ ga-ejedebe iji ojiji nke FLoC ID dị ka nchọpụta na-adịgide adịgide. Ebe ọ bụ na sistemụ ahụ na-arụ ọrụ na akpaghị aka na ihe nchọgharị weebụ dị ka Chrome, Google akọwaghị kpọmkwem otu o si achịkọta ngalaba.
Kaosinadị, ụlọ ọrụ mgbasa ozi (nke nakweere teknụzụ ntanetị dị mkpa dị ka kuki na adreesị IP iji chọpụta ndị mmadụ na ntanetị) hụ ohere ime otu ihe ahụ na ID FLoC na-enwe olileanya igbochi nhụjuanya kuki ga-apụ n'anya.
Oge n'aga, Ihe nchọpụta FLoC nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe nchọpụta na-aga n'ihu n'otu ụzọ ahụ adreesị IP, Nishant Desai, onye nduzi nke teknụzụ na otu ọrụ na Xaxis kwuru, ogwe aka adtech GroupM.
Dị ka adreesị IP, NJ FLoC agaghị ezu oke. Agbanyeghị, otu ID ahụ FLoC ma ọ bụ otu ụdị ID ahụ nwere ike jikọtara mmadụ.
"Ọ bụrụ na omume ya agbanweghị, algorithm ga-anọgide na-emetụta ya n'otu ìgwè ahụ, ya mere ụfọdụ ndị ọrụ ga-enwe FLoC ID na-adịgide adịgide metụtara ha, ma ọ bụ nwee otu."
Ndị na-eme ihe nzuzo ekwuola na nzere FLoC nwere ike belata ihe isi ike maka ụlọ ọrụ ịnakọta ozi gbasara mmadụ.
Ọ bụ ezie na onye ọrụ weebụ kwesịrị ịga leta weebụsaịtị ọ dịkarịa ala otu oge tupu saịtị ahụ enwee ike kuki kuki na igwe ha iji chọpụta mmegharị ha na weebụ, a ga-amata ID FLoC na akara ọ ga-ewe.
Na mgbakwunye na ijikọ ihe nchọpụta FLoC na ụdị data ndị ọzọ, Enwere ike iji usoro nke Google na-enweghị nri iji kee profaịlụ ndị na-ege ntị.
Agbanyeghị, o doro anya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ele asambodo FLoC dị ka data njirimara nwere ike ịba uru, nke mere na ndị na-akwado nzuzo dị ka ndị Saịprọs na-ele ha anya dị ka ihe nzuzo nzuzo, nke na-abụghị usoro iwu.
Chrome ga-ekenye onye ọrụ Chrome ọ bụla aha ya bụ FLoC ID na-ewepụghị aha, na-egbochi ọnọdụ mkpuchi ihe nchọgharị ahụ ma ọ bụ na-egbochi ya na ndọtị. Yabụ ọbụlagodi na mmadụ agatụbeghị mbụ na saịtị, ID FLoC nwere ike ikpughe ozi gbasara onye ahụ nke saịtị ma ọ bụ usoro mgbasa ozi nwere ike ọ gaghị enwe.
Dịka ọmụmaatụ, ọnụ, akara data ndị a nwere ike ikpughe okike mmadụ, ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịnọ na ntinye aka ma ọ bụ n'okpuru ego ụfọdụ, ma ọ bụ na ha bi n'otu mpaghara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Companieslọ ọrụ mgbasa ozi na-achọ ụzọ iji jikọọ data ndị ọzọ na FLoC
Mee 2021: Ihe oma, ihe ojoo na ihe na-adighi nma nke Software efu